Nahatonga Fientanentanana Ny Nahafantarana Fisian’ny Persianina Tao Japana Fahiny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Oktobra 2016 4:57 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, Nederlands, English
Fanorenana indray ny Vavahady Suzuka amin'ny endrika tena izy vita amin'ny vy, ao amin'ny Lapa Heijo teo aloha any amin'ny faritra andrefan'ny tanàna Nara. Nanaovana fitiliana tamin'ny alalan'ny fitarafana infrarouge vao haingana ny takelaka hazo taloha avy ao amin'io toerana io. Sary avy amin'ny mpisera Flickr Sek Keung Lo.
Nanamafy ny vokatry ny fikarohana nataon'ny Ivontoerana Nasionaly Momba Ny Fikarohana Ny Toerana Ara-kolontsaina ao Nara fa nanana fifandraisana lehibe tamin'ny kolontsaina iraisampirenena i Japana fahiny ary nampitaina tamin'ny alalan'ny Lalan'ny Lasoà izany rehetra izany.
Nanambara ny Ivontoerana fa nahitana mpiasam-panjakana persianina — noho ny anarany — ny sarin'ny takelaka hazo vaovao notarafina tamin'ny infrarouge ary nampiasaina ho fandraketana rakitsoratra tany amin'ny taonjato faha-8 tao Japana — ary heverina ho manam-pahaizana sy mpampianatra manokana izay nanompo tao amin'ny Lapan'ny Amperora Japoney ilay ranamana.
Vitsy sy sarotra tadiavina ireo firaketana ny fifanakalozana tao Japana fahiny raha efa ela no nekena fa nankafy fifandraisana ara-barotra tamin'ny firenena sy ny kolontsaina rehetra manamorona ny Lalan'ny Lasoà i Japana . Maneho fahitana lehibe ny vokatry ny fitarafana infrarouge .
Araka ny lahatsoratra iray avy amin'ny sampan-draharaha mpanome vaovao AFP-Jiji, izay naverina navoaka tao amin'ny Japan Times , ” fantatra fa nanana fifandraisana mivantana ara-barotra hatramin'ny taonjato faha-7 fara fahakeliny i Iran sy Japana ankehitriny, kanefa milaza fifandraisana bebe kokoa ny fitiliana vaovao natao tamin'ny hazo fisaka iray izay hita voalohany tany amin'ny taompolo 60 “. Araka ny tsonga avy amin'i Akihiro Watanabe, mpikaroka ao amin'ny Ivontoerana Nasionaly Momba Ny Fikarohana Ny Toerana Ara-kolontsaina ao Nara, dia nilaza ilay lahatsoratra fa niasa tao amin'ny Akademia izay nanofanana ny manampahefan'ny governemanta ilay mpiasam-panjakana ary heverina fa ary mety ho nampianatra matematika izy noho ny fahaizana manokan'i Iran amin'io lohahevitra iray io.
Tamin'izany fotoana izany, takelaka hazo (fa tsy taratasy) no fampiasa ho fandraketan-tsoratra:
Raha ny fahitàna azy, nisy #Persianina nipetraka tao Nara #Japan arivo taona lasa izay, https://t.co/8bgbNIqncC pic.twitter.com/2KPq6hkdwX
Manasongadina ny sarin'ilay takelaka tany am-boalohany ny sioka avy amin'ny seha-baovao Sankei News West, sy ny fandikan-teny amin'ny teny Japoney ankehitriny ny amin'izay voasoratra teo amboniny. Misy ihany koa ny sarintany mampiseho ny toerana nahitana ny takelaka .
Indray andro nisy mpiasam-panjakana persianina niasa tao amin'ny Lapa Heijo! Nanamarina ny takelaka vita amin'ny hazo tany amin'ny taonan'ny Tompo 765 fa ‘nanana fahaizana manokana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena’ ilay olona, ary tena manam-pahaizana momba izany.
Anisan'ireo mandrafitra ny Lapa Heijo-Kyo ao an-tanànan'i Nara ny Lapa Heijo. Naorina tany amin'ny tapaky ny taonjato faha-8 ny Heiijo-Kyo, ary natao ho renivohitr'i Japana izy nandritra ny taompolo maro talohan'ny namindrana ny renivohitra tany an-kafa. Tamin'izany fotoana izany, mbola tao anatin'ny fanavaozana tanteraka i Japana – nampiditra ny teknolojia sy ny fomba fanao ara-kolontsaina avy any amin'ny faritra hafa ao Azia — anisan'izany ny maritrano sy ny endrika artistika, ny fivavahana ary ny rafitra ara-pitsarana manana lalàna voasoratra. Indrindra indrindra, ny maritrano sy ny lalàna ara-pitsarana dia voasariky ny Tarana-panjaka Tang avy ao Shina ny ankamaroany.
Raha tsy misy intsony ny tanàna fahiny, nofongarina ny ankamaroan'ny sisa tamin'ny Heijo-Kyo tao anatin'ny 70 taona farany. Amin'izao fotoana izao, natao zaridainam-bahoaka lehibe ny faritra ary hita any andrefan'ny afovoan-tanànan'i Nara .
Toerana ao Heijo-kyo, Nara. Sary: Nevin Thompson.
Tsy tokony hahagaga raha nisy ny olona avy any Persia nivelona sy niasa tao Japana izay hita tany amin'ny faran'ny Lalan'ny Lasoà tamin'ny taonjato faha-8. Nampifandray an'i Japana tamin'ny firenena sy ny faritra lavitra tany andrefana ny lalana, anisan'izany Persia sy ny Ampira Bizantinina.
Ny fiitaran'ny Bodisma tao Azia, niditra voalohany tao Shina tamin'ny alàlan'ny Lalan'ny Lasoà ny Bodisma Mahayana. Avy amin'ny mpisera Wikipedia Gunawan Kartapranata. CC BY-SA 3.0.
Nakamban'ny fitaomana ara-kolontsaina mitohy avy any Azia atsimo sy afovoany ny kolontsaina Japoney fahiny, sy avy any Persia. Maro ny andriamanitra kely sy andriamanitra tapany tao amin'ny finoana Bodista Japoney izay nanana ny fiaviany avy any amin'ny faritra hafa ao Azia. Toy izany ity sarivongana Asura iray ity izay tamin'ny taonjato faha-12 ary noheverina ho nanana ny fiaviany avy any amin'ny andriamanitra persianina fahiny :
Toerana: Tempolin'ny Sanjusangendo ao Kyoto; Asura iray, iray amin'ireo 28 mpanaradia an'i Kannon (vanim-potoana Kamakura). Avy amin'ny demonia Indiana fahiny ny Asuras . Noheverina ho nanana ny fiaviany tany amin'ilay naharin'ny Persianina Ahura Mazda ny Asuras.
Manana halavana 165sm io sarivongan'i Asura io; mpanaradia 28 dia izy no maneho ilay mpiady. Niady tamin'i Taishakuten (帝釈天) , ilay Tompon ‘ny Devas, mandrakariva izy ary ho resy hatrany ny Asura […] Milaza hatezerana sy fahasorenana ny endrika miseho voalohany..
Herinandro maromaro taorian'ny nahitana vola madinika romanina fahiny tao amin'ny manda-lapan'ny mpanjaka rava tao amin'ny prefektioran'i Okinawa no tonga ny fanambaràna tao Nara, izay atsimo-andrefana lavitry ny vondronosy Japoney :
Mahavariana: ” Nahita vola madinika romanina fahiny nalevina tao amin'ny lapa rava tao Okinawa tamin'ny taonjato faha-12 ny mpikaroka” https://t.co/5hGdrpo3Fp pic.twitter.com/EWlNGxE4O9
Tamin'ny fanambarana momba ilay mpiasam-panjakana Persianina tao Nara, namisavisa ny mety ho endrik'ilay olona ny bilaogera Japoney sasany.
Naka sary an-tsaina ny bilaogera iray raha toa ka niainga tamin'ny fombafomba an-dapa Persianina fahiny na mponina kosmopolitana hafa tao Nara tamin'ny taonjato faha-8 ireo sarontava gigakumen, .
Manontany tena aho raha toa izao ny endrik'ilay mpiasam-panjakana Persianina avy ao Nara ?
Nanome fampidirana mahafinaritra amin'ity vanim-potoan'ny tantara Japoney ity ny Mozea Nasionalin'i Nara.